Runtastic စစ်-ups ABS လေ့ကျင့်ခန်း | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » Runtastic စစ်-ups ABS လေ့ကျင့်ခန်း
Runtastic စစ်-ups ABS လေ့ကျင့်ခန်း APK ကို
သင့်ရဲ့ ABS အားကောင်းလာစေရန်နှင့် sexy6pack ကိုရလိုပါသလား? သင့်ရဲ့ ab လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်တက်ထိုင်စိန်ခေါ်မှုနှင့်အတူစတင်ရန်ရန်စိတ်အားထက်သန်? အခမဲ့ Runtastic စစ်-ups ABS လေ့ကျင့်ခန်း app ကို Download လုပ်ပြီးအရှိဆုံးကောင်းစွာသိ ab လေ့ကျင့်ခန်းအတူစစ်မှန်သောမျက်စိ Catcher သို့သင့်ရဲ့ဝမ်းဗိုက်လှည့်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုင် UPS သင်တန်းပေးသူ, သင့်စမတ်ဖုန်းကိုခေါ်, သင်သည်သင်၏ထိုင် ups ယလေ့ကျင့်ခန်း၏ထိပ်ပေါ်မှာနေဖို့ကူညီပေးသည် - သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုကနေလှုံ့ဆျောမှုဆွဲပါ။ ကအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပြားချပ်ချပ်ဝမ်းနှင့်6pack ကို ABS မှကြွလာသောအခါထိုင်နေ-ups လူကြိုက်အများဆုံးဝမ်းဗိုက်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်ခန်းအကြားရှိပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေမြင့်မားထိရောက်သောလေ့ကျင့်ခန်းပါပဲနှင့်သင်တို့၏6pack ကိုဦးတည်နေတဲ့ကြီးမားတဲ့ခုန်ယူကူညီပေးပါမည်။ ယခုအချိန်တွင်ကိုအမိအရဆုပ်ကိုင်, သင့်လှုံ့ဆျောမှုအရှိဆုံးပါစေနှင့်ကန်-ပယ်သင့်ရဲ့ခရီးစုံလင်သော ABS ပါ! သငျသညျစိန်ခေါ်မှုတက်ထိုင်မယ့် 30 နေ့အဘို့တက်ဖြစ်ပါသလား
အင်္ဂါရပ်များ & အကျိုးခံစားခွင့်
* အရေအတွက်သည်သင်၏ထိုင် ups ယလေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာ accelerometer ကို အသုံးပြု. အထပ်ထပ်တက်ထိုင်
အဆင့် 1 မှ * Access ကိုအပြည့်အဝကိုသင့်ဝမ်းဗိုက်ပစ်မှတ်ထားဖို့သိပ္ပံနည်းကျဖွံ့ဖြိုးပြီးလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်၏ ups ယလေ့ကျင့်ခန်းထိုင်
စဉ်ဆက်မပြတ်တုံ့ပြန်ချက်များအတွက် * Voice ကိုနည်းပြ
* သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့ set ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတ်တမ်းများ Beat
* လွှတ်တင်ခြင်း ab လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလှုပ်ရှားမှုများ Runtastic.com မှ
Google+ မှာ, Facebook, Twitter သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်အပေါ် * သင့်ရဲ့ထိုင်ထ Share စိန်ခေါ်မှုအောင်မြင်မှု
* သင့်ရဲ့ MyFitnessPal အကောင့်ရန်သင့် ab ယလေ့ကျင့်ခန်းပေါင်းစပ်
လေ့ကျင့်ခန်းအစုံအကြားသင့်ရဲ့ကြွင်းသောအရာများအတွက် * အလိုအလျောက်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ timer
တစ်ဦးကသင့်ကိုလုံးဝသင့်ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်ထွက်ခေါက်မည်မျှကိုယ်စားလှယ်များအသိပေးတန်ပြန်တက်ထိုင်။ တောင်မှပိုကောင်း: သင်ခြေလှမ်းဖြင့်သင့်ဝမ်းဗိုက်တိုးတက်မှုခြေလှမ်းစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြု, သင့် ab လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်တစ်ဦးအကြီးအခြုံငုံသုံးသပ်ချက်အရ။ သင်တစ်ဦးတက်ထိုင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအရာတယ်? အဆိုပါ Runtastic စစ်-ups ABS လေ့ကျင့်ခန်း app ကိုနှင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုတိုးပှားနှင့်နောက်တဖန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောငျးဆုံးအခြိနျရိုက်နှက်ရန်ကြိုးစားပါ။ ထို့နောက်သင့်ရဲ့ထိုင်ထတန်ပြန်မှတ်တမ်းများထွက်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက် ABS ယလေ့ကျင့်ခန်း session များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုဆွဲပါ။ C'mon, ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိန်ခေါ်နှင့်မီးပေါ်မှာသူတို့အားဝမ်းဗိုက် set!
သင့်ရဲ့ထိုင် ups အလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ smartphone / tablet တစ်လုံး၏ accelerometer ကို အသုံးပြု. အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သင့်ရဲ့ ab လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းမှာရေတွက်စောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သို့မဟုတ် 30 တစ်ရက်မျှမစိန်ခေါ်မှုတက်ထိုင်။
အဆင်ပြေ: သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်, Runtastic.com ရန်သင့် ab ယလေ့ကျင့်ခန်း upload တင်လို့ရပါတယ်။ ထိုပြည်၌သင်တို့သည်အချိန်မရွေးအားလုံးသင့်ရဲ့ ab လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စာရင်းဇယားရယူအဖြစ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးမှတ်တမ်းရန်သင့်အောင်မြင်မှုကျေးဇူးတင်စကားစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကိုသတိရပါ, သင်သည်လည်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူသင်၏အောင်မြင်မှုများကိုမျှဝေနိုငျပါသညျ!
ခိုင်မာတဲ့, သတ်မှတ်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားတွေဖွင့်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမြှင့်တင်ရန်မည်မဟုတ်, သူတို့ကလည်းသင့်ရဲ့ခန်ဓာကိုယျတစျခုလုံးတည်ငြိမ်။ သင့်ရဲ့ midsection များအတွက်မြန်ဆန်ထိရောက်အစွမ်းသတ္တိကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းအဘို့အ Runtastic Situps အပေါ်အားကိုး။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင့်ရဲ့ 30 နေ့ကစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်တက်ထိုင်နှင့်ထို ABS ရသွားပါ Start!
Runtastic Situps: သင်တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်ဝမ်းအဘို့လိုအပ်တယ်အားလုံး!
Runtastic အားလုံးကျန်းမာရေး & ကြံ့ခိုင်ရေး apps များနှင့် ပတ်သက်. ပါ! သငျသညျ http://play.google.com/store/search?q=pub:Runtastic မှာသင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ apps များပိုမိုထုတ်စစ်ဆေး
Runtastic စစ်-ups အတွက်နယူး:
* သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ရေတွက်: ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှအတွေ့အကြုံအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ app များကိုတိုးတက်အောင်ပါတယ်။
Runtastic Love?5ကြယ်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ရန် & ကို Google အတွက်သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကို Store မှာ Play အကြောင်းတခြားသူတွေကိုပြောပြပါ။
Runtastic စစ်-ups ABS လေ့ကျင့်ခန်း
16.74 ကို MB
Runtastic ခြေလှမ်းများ - ...
ခုနစျပါး -7မိနစ်လေ့ကျင့်ခန်း
အားကစားရုံ Guider အော့ဖလိုင်း
JEFIT လေ့ကျင့်ခန်း ...
The Sun Ephemeris (နေဝင်ချိန်၊ နေထွက်၊ လနေရာ)